नेपालमा बहस चलिरहेकै बेला श्रीलंकामा एमसीसी अस्वीकृत, अब नेपालमा के होला ? - Himali Patrika
नेपालमा बहस चलिरहेकै बेला श्रीलंकामा एमसीसी अस्वीकृत, अब नेपालमा के होला ?
हिमाली पत्रिका १६ फाल्गुन २०७६, 9:43 am
कोलम्बो : नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) श्रीलंकाले अस्वीकृत गरेको छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बन्डुला गुनावर्दनेले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिए।
बिहीबार एमसीसी पुनरावलोकन समितिले प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
लगत्तै शुक्रबार सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको श्रीलंकाली सञ्चारमाध्यम द सन्डे मर्निङले उल्लेख गरेको छ।
प्रवक्ता गुनावर्दनेका अनुसार यसअघि सरकारले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नेबारे अमेरिकासँग कुरा गर्ने तयारी गरेको थियो।
श्रीलंकाले गत डिसेम्बरमा तत्कालका लागि एमसीसी स्थगित गरेको थियो। डिसेम्बर २१ मा राष्ट्रपति गोटाभाया राजपाक्षले ट्वीट गर्दै विस्तृत अध्ययन नगरेसम्मका लागि एमसीसी स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए।
एमसीसीले सन् २०१६ डिसेम्बरमा आफ्नो योजना लागू गर्नका लागि श्रीलंकालाई छनोट गरेको थियो भने २०१८ अगस्टमा सम्झौताका लागि अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराएको थियो।
के हो एमसीसी
एमसीसीको मतलव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरशन हो। याे विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित एक परियोजनाका रुपमा सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।
सन् २०१२ यता विभिन्न चरणको छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन भएको हो। यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्वस्था छ।
यो नेपालको अर्थ मन्त्रालयअन्तरगतको विकास समिति हो। एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असोज १२ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो।